Semalt: Iyini i-imeyili Spam? Kungani Uhulumeni Uyakhathalela?
I-imeyli ogaxekile iyinto ecasulayo futhi eyingozi kuwe. U-Igor Gamanenko, uchwepheshe we-Semalt , uchaza ukuthi kwenzeka lapho abakwa-spammers besakaza izinto ezinonya kuyi-intanethi, futhi i-target yabo eyinhloko ikheli lakho le-imeyili. Ngisho noma ubika abathumeli abaningi abangaqondakali ku-Gmail, i-Yahoo, ne-Rediff, awukwazi ukuqeda i-imeyli ogaxekile ngokuphelele njengoba abagadli bebenzisa amaqhinga ahlukene okubhekiswe kubasebenzisi - ubiquiti poe splitter 24v.
Ngencazelo, i-imeyli ogaxekile yilapho i-imeyili ihlangabezana nanoma yikuphi okulandelayo:
Ukuhanjiswa kweMisa: Ama-imeyili athunyelwa kwinani elikhulu labantu.
Ukungaziwa: Lokhu kwenzeka uma ubunikazi kanye nekheli lomthumeli livaliwe, futhi awukwazi ukuhlola ukuthi ikuthumelelephi umbiko.
Akuceliwe: Umamukeli akaceli ama-imeyili; namanje, uthola imilayezo engenasici cishe nsuku zonke..
Kungani ohulumeni benakekela nge-imeyili ogaxekile?
I-US Federal Government kanye ne-Federal Trade Commission (FTC) ibonise ukukhathazeka nge-spam ye-imeyli futhi iqalile ukusebenza kwe-Can-Spam federal emuva ngo-2003. Ngokwalesi senzo, abasebenzisi bangathola ama-imeyili abo abhalisiwe, futhi i-FTC izoqapha njalo imisebenzi emakheli e-imeyili. Umsebenzi oyinhloko we-FTC ukuvikela amalungelo omthengi namalungelo ngendlela engcono.
Naka ukuthi i-spam ye-imeyli ingakubeka engozini ngezindlela eziningi. Ezinye zazo zixoxwe ngezansi:
Izingozi zezeMali kanye nobumfihlo: Njengoba ama-imeyli ogaxekile aklanyelwe futhi athuthukiswe ukucela ulwazi lwezezimali nedatha ebucayi njengama-ID we-PayPal, izinombolo zekhadi lesikweletu, kanye nedatha yangasese njengenombolo yokuphepha yomphakathi kusuka kubasebenzisi, le datha isetshenziselwa ukweba ubunikazi nezinhlobo ezahlukene zobugebengu obuku-intanethi. Isenzo se-Can-Spam asivimbeli ama-imeyili ekufinyeleleni ibhokisi lakho lemilayezo engenayo kodwa kuvimbela inani labagaxekile ngokuvimbela amakheli abo e-IP impilo yonke.
Ukuvikelwa kwezingane: Isenzo se-spam singasungulwa ukuze kuqedwe inani elikhulu lama-imeyili angafuneki adlulisa izinsizakalo zabantu abadala ezingenasidingo nezingenamsebenzi ezinganeni zethu. Ayikho indlela eqondile yokuvimbela izingane zethu ukuba zihlanganyele ngamakheli abo e-imeyili, kodwa singahlunga inani labathumeli bokuqinisekisa ukuphepha kwabo kwi-intanethi.
Kungani ama-spammers ethumela ama-imeyili ogaxekile?
Amathuba ukuthi abakwa-spammers bafuna ukuphazamisa amakheli wakho we-imeyili, bafuna ukufinyelela kuma-computer akho, bafuna ukuthola izinzuzo zezimali besebenzisa imininingwane yakho, futhi bafuna ukucasula abangane bakho nomndeni wakho ku-intanethi ngokuzithumela imilayezo eyisiphukuphuku ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, abanye babo bathumela ama-imeyili ogaxekile ukukhangisa imikhiqizo yabo futhi bazame ukukhohlisa abasebenzisi ngezithombe zabo zokubamba amehlo namavidyo kliphu. Ngandlela-thile noma enye, ama-imeyili ogaxekile ayingozi, futhi kufanele udale izihlungi zama-ID we-imeyili asolisayo nabathumeli, uqinisekise ukuvikeleka nokuphepha kwakho kwi-intanethi. Uma ubanjwa abakwa-spammers, ungase ulahlekelwe imali eningi futhi ungase ubone ibhizinisi lakho libhujiswa ngenxa yemisebenzi yabo esolisayo noma engekho emthethweni. Akumelwe ubhalisele ezincwadini zezindaba ezingajwayelekile futhi akufanele uthenge noma yini ezitolo ezingekho ezinokwethenjelwa.